Afro-Canadian Winter Cup 2015
Waxaa magaalada Toronto ka furmay koobkii la mgac baxay Afro-Canadian Winter Cup 2015.
Tartankani ayaa waxaa kasoo qeybgalay 6 kooxood oo kala ah: Muqdisho FC. Dixon FC, Semcy, Xiddigaha FC, Hilac iyo Horseed. Kooxahani ayaa waxaa tartankani uga qeybgalayaa midkiiba 3 kooxood oo ay da'doodu tahay U12.(2003-2004) U14(2002-2001), U16(1999-2000).
Tartankani ayaa waxaa lagu bilaabay ciyaartooyda ay da'dooda ka yar tahay 12 jir(U12) ama ciyaartooyda dhalatay 2003 iyo 2004.
Kooxahan ayaa waxaa loo qeybiyay laba qeybood. Qeybta A (Group A) oo ay ku wada jiraan Semcy. Dixon iyo Xiddigaha. Qeybta B(Group B) waxaa iyaduna isku arki doonaa kooxaha Muqdisho, Hilac iyo Horseed.
Qeybta A (Group A) ayaa ah mid aad u adag oo seddaxda koox ee ku wada jira aaney kala liidan.
SEMCY OO CASHAR U DHIGTAY XIDDIGAHA
Ciyaartii furitaanka ayaa waxaa wada ciyaaray kooxda Secmy iyo Xiddigaha oo iyagu ka tirsan qeybta A(Group A). Labdan kooxood ayaa bishii la soo dhaafay ee December 2014 ku loolamay koobkii la magac baxay 2014 Youth Challange Cup oo ay guusha ku raacday Xiddigaha.
Hadddaba tababare Anwar iyo Cumarey Baarba ayaa kooxdooda soo xoojiyay iyagoo kusoo talo galay iney xiddigaha ka aar goostaan. Arrintan si fiican ayay ugu guuleystee iyagoo 3-1 ay cashar ugu dhigeen kooxda Xiddigaha.FC.
Xiddiga garoonka waxaa ahaa goolhayaha Semcy oo isaga ugu yaraan 5 gool bad baadiyay.
Goolhayahan ayaa isagu u muuqda mid mustaqbil fiican ku yeelan karo kubadda cagta haddii uu da'daalka halkiisa ka sii wado.
MUQDISHO OO WADNA XANUUN KU RIDAY HORSEED
Ciyaartii labaad ee koobkani ayaa waxaa wada ciyaaray kooxda Horseed iyo Muqdisho oo ka tirsan Group B.
Kooxda Horseed ayaa waxay fileysay iney si fudud uga badin doonto Muqdisho, welibana ay ku gool badsan doonto.
Bilawogii ciyaartaba waxaa gool ku hormartay Horseed, hase yeshaa 5 daqiiqo kadib ayay Muqdisho dhalisay goolkii bar bardhaca. Intaa kadib ciyaatani xamaasad hor leh ayay yeelatay iyadoo labadan kooxoodba weerar iyo weerar celin isku qaaday.
Ugu dambeyntii labadan kooxood ayaa waxay ku kala hooydeen bar bardhac 3-3.
Natiijadani bar bardhaca ayaa kooxa Horseed ay ula mid tahay guul darro waayo waxay filayeen iney si fudud uga guuleysan doonaan Muqdisho balse halkaasi kala hooyday wadna xanuun iyagoo weliba ku sigtay in laga badiyo.
DIXON OO KALA DIRTAY HILAC
Waxaa ciyaar saaxibinimo wada ciyaaray kooxa Dixon Fc iyo Hilac Fc. Ciyaartani oo aad u xiiso badnayd ayaa waxay guusha ku raacday Dixon Fc oo 6-3 ku kala diray Hilac FC.
Waxaa ciyaarahni garsoore ka ahaa Muuse Dhiblawe (Muuse Abti) oo si fiican u dhex dhexaadiyay dhamaan kulamadii oo dhan.
Ciyaarahan iyo wareysiyo oo maqal iyo muuqaal ah la soco goor dhow